DABAGALKA WARKA: Miyey fashilmeen dadaaladii Caalamiga ahaaa ee loogu jiray in la baajiyo dagaalka Tukaraq, Maxaase ka soo baxay Socdaalkii Nabadda ee QM? – Puntlandtimes
DABAGALKA WARKA: Miyey fashilmeen dadaaladii Caalamiga ahaaa ee loogu jiray in la baajiyo dagaalka Tukaraq, Maxaase ka soo baxay Socdaalkii Nabadda ee QM?
May 14, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE/HARGEYSA(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa dabagal ku sameeyey socdaal nabadeed uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan arrimaha Soomaalida Micheal Keating uu ku tagay magaalooyinka Hargeysa & Garoowe, si loo baajiyo colaad dhexmarta labada maamul ee Puntland iyo Somaliland.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa socdaalkiisa ka bilaabay magaalada Garoowe, wuxuuna ka codsaday Madaxda Puntland in ay joojiyaan xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, waxaana ay Puntland u sheegtay in ay doonayso nabad, Somaliland aysan ka aqbali doonin in ay ku sii sugnaato deegaanada gobalka Sool.
Puntland waxay ku adkeysatay in ay doonayso luuqad kasta oo lagu wajahayo xaaladda gobalka Sool, waxaana ay Madaxda Dawladda Puntland cadeeyeen in ay qaadanayaan doorkooda ku wajahan xaaladda taagan.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in safarkii Keating ee Hargeysa uu la kulmay Somaliland u diyaar garowday in ay iska difaacdo wararka ku saabsan arrimaha Tukaraq, waxayna u soo gudbiyeen in ay si bareer ah u diideen talaabada ay ciidamadooda ugala laabanayeen deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool.
Somaliland waxay cadeysay in aysan ka bixi doonin deegaankaas, balse xaduudooda oo ay sheegeen in ay 60KM u jirto meesha ay hadda joogaan aysan u soconin waqtigan, taas oo ahayd arrin kale oo la yaab ku noqotay Wakiilada caalamiga ah.
Xog ay heshay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in uu si rasmi ah u fashilmay wada hadalkii Nabadda ee ay garwadeenka ka ahayd Qaramada Midowbay, kaas oo yoolkiisu ahaa in nabad lagu dhameeyo xaaladda ka taagan deegaanka Tukaraq.
Ergayga gaarka ah ee QM oo shalay ka hadlayay Hargeysa wuxuu sheegay in nabadda oo laga shaqeeyo labada dhinacba ay dani ugu jirto, taas oo ah arrimaha ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii xasilooni iyo daganaanshaha loo adkeyn lahaa.
Sidda muuqata labada dhinacba hadda waxay ku qasban yihiin in ay qolo kasta damaceeda fushato, waxaana subaxnimadii hore ee saaka la maqlay hubka culus iyo dhaqdhaqaaq ciidamada qaarkood ay sameeyeen, waxaana cabsi laga qabaa in uu dagaal rasmi ah ka dhex bilowdo labada dhinac.